रोचक/बिचित्र Archives - SangaloKhabar
विराटनगर । दाँत माझ्ने क्रममा मुखबाट ब्रस छिरेपछि मोरङको मिक्लाजुङ्गका एक व्यक्तिको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा पेट चिरेर ब्रस निकालिएको छ । मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका–४ टाँडीका ३५ बर्षीय गंगा मगरले दाँत माझ्ने क्रममा जिब्रो सफा गर्दै गर्दा मुखबाट ब्रस छिरेर पेटमा पुगेको हो । घटना गत बुधबारको हो । बिहान उनी दाँत माझ्दै धारामा गएका थिए । सोही क्रममा मुखको भित्रसम्म ब्रस छिराएर जिब्रो सफा गर्दै गर्दा छिप्...
धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी एक युवतीले अस्वभाविक बच्चा जन्माएकी छन् । महालक्ष्मी–७ अर्खौलेकी १८ बर्षीया कोपिला श्रेष्ठले आन्द्राभुँडी बाहिरै भएकी छोरी जन्माएकी हुन् । जितपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराउँन लगिएकी श्रेष्ठले पहिलो सन्तानका रुपमा जन्म दिएको बच्चाको पेटबाट आन्द्राभुडी बाहिर निस्किएको छ । ‘नर्मल डेलिभरी’ भएको भएपनि बच्चा भने अस्वभाविक जन्मिएको प्राथमिक...
सुनसरी । धरानस्थित बीपी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी कुरुवाको पैसा चोर्दै गर्दा सुरक्षागार्ड रंगेहात पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत धरान ११ शिबजी चौकका ३६ वर्षीय सुरक्षागार्ड सुरज श्रेष्ठ छन् । अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामी लिएर आएका कुरुवाको पर्सबाट चोरी गरेको पैसासहित श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले संग...
काठमाडौं । नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले सोमबार पाँच शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति गृह उनले चार जिवित र एक मृत शिशु जन्माएकी हुन् । प्रसुति गृहका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदी नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले शल्यक्रिया गरी तामाङको पेटबाट पाँच शिशु निकालेका हुन् । जिवित चार शिशुको तौल क्रमसः १ किलो ९ सय ग्राम, १ किलो ८ सय ग्राम, १ किलो ६ सय ग्राम र ...
धनकुटा । धनकुटामा भेटिएका आठौं कोरोना संक्रमितलाई ट्याक्टरमा राखेर गाउँबाट अस्पताल पठाईएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सहिदभूमी गाउँपालिका–७ का २७ बर्षीय संक्रमित युवालाई उपचारका लागि गाउँबाट ट्याक्टरमा राखेर पठाईएको हो । रोजगारीका लागि भारत गएर फर्किएका ती युवा सहिदभूमी गाउँपालिका–१ धाप स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको क्वारेनटाईनमा थिए । स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा बुधबार उनमा कोरो...
सुरुङा । विवाह मण्डपमा रहेकी बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात नउठेपछि बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई चारलाख जरिवाना तिरेका छन् । यो झापाको घटना हो । मङ्सिर २९ गतेको दिउँसोको लगनमा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ का न्यौपाने थरकी एक युवतीसँग भद्रपुर नगरपालिका–७ का सुवेदी थरका एक युवकको वैवाहिक कार्यक्रम हुँदै थियो । वैवाहिक कार्यक्रमअनुसार बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्ने बेलामा बेहुलाक...
जनकपुरमा जन्मियो अनौठो बच्चा : एउटा जिउमा दुई टाउको, चार आँखा र चार कान
जनकपुरधाम । जनकपुरमा अनौठो बच्चाको जन्म भएको छ । जनकपुरधामको रामानन्द चौक स्थित मिहिलाल इन्टरनेशनल अस्पतालमा दुई टाउको भएको बच्चा जन्मिएको हो । अस्पतालका प्रमुख रामबाबु यादवका अनुसार सिरहाको कर्जनाहा नगरपालिकाको बल्टियाकी २५ वर्षीया सविता वैद्यले एउटा जिउमा दुई टाउको, चार आँखा र चार कान भएको बच्चालाई बिहिबार जन्म दिएकी हुन् । डा. रुवी सिंह नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले शल्यक्रियाको माध्यमबाट बच्चा...
किन फ्याँक्छन् बेलायतीले बर्सेनि ७२ करोड अण्डा ?
एजेन्सी । नेपालमा अण्डाको माग, खपत तथा मूल्य बढिरहेको छ । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो देश छ जहाँका मानिसहरु बर्सेनि करोडांैं अण्डा फोहोरमा फ्याँकेर नष्ट गर्दछन् । यसरी करोडौँ अण्डा नष्ट गर्ने कारण पनि अनौठो रहेको छ । एक अध्ययन अनुसार, बेलायतमा हरेक वर्ष करीब ७२ करोड गोटा अण्डा फोहोरमा फ्याँकेर नष्ट गरिन्छ । सन् २००८ मा बर्सेनि झण्डै १४ करोड अण्डा फ्याँक्ने गरिएकोमा एक दशकमा त्यो संख्या ५ गुणाले ...
चीनमा विश्वका अतिदुर्लभ मानिने नरम खपटा भएको एउटा याङ्त्सी कछुवाको मृत्यु भएको छ। सो पोथी कछुवा मरेपछि अब संसारमा सो प्रजातिका तीनवटा कछुवा मात्र बाँकी छन्। सो कछुवालाई दक्षिणी चीनस्थित सुजो चिडियाखानामा राखिएको थियो। विज्ञहरूले ९० वर्षको सो कछुवा मर्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै पाँचौँ पटक कृत्रिम रूपमा गर्भाधारण गराउने प्रयास गरेका थिए। कछुवाको सो प्रजाति माछा तथा कछुवाको सिकार र वासस्थानको अति...
यो किला होटलका कोठा सन् २०२० सम्मलाई बुकिङ भैसकेका छन्
१९ औं शताब्दीमा मदिरा सेवन तथा गैरकानुनी कामका लागि कुख्याति कमाएको लन्डनको डायडेन किला अहिले रोमान्टिक जोडिहरूको लोकप्रिय गन्तब्य बन्न थालेको छ । फोन र इन्टरनेटको सुविधा नभएको यो किलालाई अहिले होटलमा परिणत गरिएको छ । यही कारणले पनि यो किला होटलमा रात बिताउन जोडीहरूले त“छाडमछाड गर्न थालेका छन् । परिणामस्वरूप यो किला होटलका कोठा सन् २०२० सम्मलाई बुकिङ भैसकेका छन् । लन्डनको कर्नबेल क्षे...